शनिबार, २७ असार २०७७, ०१ : ३१
महँगो घरका शौखिन
केन ग्रिफिनले अचम्मै गरी नाम कमाए । उनी अर्बपति भएकाले नाम कमाएका होइनन् । संसारभरि केनजस्ता अनेकन अर्बपति छन् । उनी तीमध्ये केही अर्बले बढी वा कमले नाम कमाएका हुनन् तर नाम कमाउने बाटो अर्कै समाते ।
को हुन् नाङ्गै दौडिने यी व्यक्ति ?
५६८ ठाउँ नग्न हुने व्यक्ति भन्छन्, ‘म रोकिन्नँ, नाङ्गिन जारी राख्छु ।’
पूर्व सौतेनी आमासँग बिहे, बाबु जन्त गए
यो घटना सन् २०१४ को हो । लामो समयसम्म चलेको कानुनी विवादपछि फ्रान्समा एक जना व्यक्तिले आफ्नी सौतेनी आमासँग बिहे गरेका छन् ।
डरलाग्दो ठाउँमा बिहे
हरकोही आफ्नो बिहे केही फरक र रोमाञ्चक होस् भन्ने चाहन्छ । कतिसम्म भने गएको वर्ष भएको यो बिहेका बारेमा पढेर तपाईंको पसिना छुट्न सक्छ ।
पहिलो चिठ्ठा नै ज्याकपट
दह्रो भाग्य भएपछि कसको के लाग्छ र ! अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित एक जना हजुरआमा मर्ने बेलामा अकुत सम्पत्तिको मालिक्नी भएकी छन् ।
कार डान्सको कीर्तिमान
चिल आकारमा गाडीको नृत्य प्रस्तुत गरेको भन्दै गिनिज बुकले कीर्तिमान घोषणा गरेको छ । एक साथ एक सय ८० वटा निजी गाडी एकै ठाउँमा भेला पारी गाडी नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।
‘चेन फर चेन्ज’ अर्थात् परिवर्तनका लागि साङ्लो नाममा क्यान्सरपीडितहरुका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो र सँगैमा विश्व कीर्तिमान पनि जोडिन पुग्यो ।
सुपरमार्केटमै सेक्स चर्तिकला !
रुसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रको कुर्गनिस्क सहरस्थित एउटा सुपरमार्केटमा एक जोडी युवाले हल्का एकान्त खोज्दै यौन गतिविधि गर्न खोजेको भिडियो यतिबेला इन्टरनेटमा भाइरल भएको छ ।
कपाल चोरको बिगबिगी
ग्राहकका रुपमा नयाँ दिल्लीको एउटा पसलभित्र तीन जना व्यक्ति छिरे । उनीहरुले पसलेलाई बन्दुक सोझ्याउँदै मूल्यवान् वस्तु मागे । पसलेले पनि दिन अन्कनाइरहेको थियो, यस्तो मूल्यवान् वस्तु कसरी दिने होला ? तर चोरहरुले बढी नै हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि भने पसलेले त्यो वस्तु नदिई सुख पाएनन् ।
अढाई लाखको भ्वाइलिन ५० डलरमा
अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यस्थित एउटा पसलले किनेको ५० डलरको भ्वाइलिनको वास्तविक मूल्य अढाई लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको रहेको पत्ता लागेपछि पसलमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
रानीको हाँस गन्ती गर्नेमध्येका एक डेभिड बार्बर भन्छन्, ‘यस किसिमका राजहंश कानुनले रक्षित गरिएका हुनाले बेलायतीहरु राजहंश खाँदैनन् ।
रोमानियामा एक मानिसले आफूलाई जिउँदै भएको प्रमाणित गर्न सफल भएका छन् । लामो समयसम्म पनि केही जानकारी नपाएपछि परिवारका सदस्यले ती व्यक्ति मरेको भन्दै प्रमाणपत्र निकालेका थिए । टर्कीमा कुकको रुपमा काम गर्दै आएका कोस्टान्टिन रेलियका बारेमा परिवारका सदस्यले डेढ दशकभन्दा बढी समयसम्म कुनै सूचना प्राप्त गर्न नसकेपछि उनको मृत्यु भएको भन्दै प्रमाणपत्र निकालेको थिए ।
योनिभित्र लागू औषध
अमेरिकी प्रहरीले लागू औषध ओसार–पसारको आरोपमा अभियोग लगाएको छ । ती महिलाले योनिभित्र लागूऔषध लुकाएको प्रहरीले भेटेको हो । २० वर्षीया डेसिरी बेवस्टरले योनिभित्र ८२ ग्राम लागू औषध लुकाएकी थिइन् । प्रहरीले मोटर हाँक्दै गर्दा पक्राउ गरेको थियो ।